Cannondale Synapse ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Cannondale synapse sora nyochaa
Cannondale synapse sora nyochaa
Cannondale Synapse ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
IheỌkpụkpọ Cannondale105 Ndinke kacha mma$ 2,625Igwe kwụ otu ebeNwere Ike Buyzụta. Ga-ahụ n'anya ịnya ịnyịnya, yana ọnụahịa dị ala. Nweta: TheSynapsebụ ụzọ ntachi obiigwe kwụ otu ebemaka ndi choro uzo di nma, nke di nmaigwe kwụ otu ebenke ahụ nwekwara ụfọdụ snap na pop nke agbụrụ agbụrụ.Mar 21 2019
Hey ụmụ okorobịa, nke a bụ Peter si Bikes na Life. Ugbu a anyị nọ ebe a iji lelee Cannondale Synapse, mana ọ bụ nnukwu snow ebe a karịa ka anyị chere na anyị nọ mgbe anyị nọ ebe a. Ọbụlagodi, anyị ga-ewere igwe kwụ otu ebe a maka ịgbanye ma kwuo obere ihe banyere ya ma kwuo maka ya.
Ahapụ..Kannondale ka emebere ka Synapse bụ alụmdi na nwunye, geometry agbụrụ, na nkasi obi ziri ezi ka ị nwee obi ike, na ị ga-enwe obi ike, na ị na-ebelata ọrụ na etiti ahụ ma na-eme ka mkpọtụ nke Taya gị jikọọ. ụzọ.
O yikarịrị ka ha nwere nkwusioru n'ụgbọala ọkwọ ụgbọ ala 1 nke a na-ege ntị nke ọma iji hụ na njikwa dị mma. Yabụ ọ bụ ezie na synapse bụ ntụsara ala n'okporo ụzọ dị jụụ ma dịkwatụ nwayọ. Ọ bụrụ n’ị ga-akwụsịlata pedals ahụ, ị ​​nwere ọtụtụ nke isiike na okpokoro iji mezuo nke a.
Otu n'ime ụzọ iji mezuo nke a bụ iji Power Pyramid ala bracket, Power Pyramid gbawara n'etiti na oche ozugbo na nkwado aka ya ma na-eme ka mwakpo mpụta nke akụkụ a dị n'okpuru. Oge ọ bụla ị na-aga ụkwụ na ụkwụ, ị ga-achọ ihe nkwado ụkwụ ka ọ na-esi ike ka ọ ghara ịgbada weta ike ụkwụ n'okporo ụzọ. Mgbe m laghachiri na etiti ahụ, enwere mgbanwe dị egwu na ọdịdị niile na synapse na mgbe ahụ etiti ahụ na-adakwasị m nwayọ nwayọ.
Ha na-akpọ ya ọrụ nchekwa, na ọrụ nchekwa ga-enye gị ntakịrị ntakịrị ịma jijiji na ntakịrị nkwụsịtụ, maka njikwa, nke na-eme ka ikike igwe kwụ otu ebe mee mkpọtụ, igwu ala, ịnya ụgbọ ala, na ịdị mfe igwe kwụ otu ebe ga-adaba adaba. Ha nwere ọmarịcha eriri igwe dị n'ime nke na-abịa na elektrọnik. Ha maara na ịgaghị ahụ eriri ọ bụla na igwe kwụ otu ebe a karịa breeki hydraulic.
Ọbụna ha na-eji eriri ndụ ha na-agbada site na ụkwụ ụkwụ na rotor. Ya mere Cannondale Synapse na-eji Synapse Endurance Road Geometry, nke pụtara na ị nwere nnukwu tubụ buru ibu ebe a nke na-eweta aka ahụ elu na ubu gị ma ị laghachi azụ n'uche gị ma na-atụ anya ịnọdụ ala n'otu nguzozi dị mma n'etiti jiometrị ịgba ọsọ na jiometrị ziri ezi. Nke a bụ nke mbụ ụdị okporo ụzọ m mgbe zụtara.
Ihe kpatara nke a bụ na m na-agba ịnyịnya ígwè na-adị jụụ mgbe niile, dị ka ịnyịnya ígwè papa m na Univega site na 1980s. nnukwu mmetụta dị oke ọnụ ahịa nye m. Anọ m na-agba ịnyịnya ya ọtụtụ narị kilomita n'ihi na enwere m mmasị na njem nlegharị anya. mgbe m chọrọ ịbawanye arụmọrụ m, elere m anya na geometry ntachi obi n'ihi na ọ na - agwakọta arụmọrụ nke etiti carbon yana ahụ iru ala m nwere site na igwe ochie m.
Ya mere ị maara na nke a bụ igwe kwụ otu ebe na m nwere ike ịnyagharị nke ọma ruo ọtụtụ awa, ebe ụdị ụgbọ ịnyịnya ndị ọzọ niile m gbara bụ naanị ntakịrị ihe ike maka m, ntakịrị ntakịrị n'ime ebe a ma ị maara na nke ahụ abụghị n'ezie Achọrọ m. Anọ m na nkasi obi mgbe ụbọchị niile gasịrị, anọ m mgbe m gagharịchara, anọchara m mgbe m si n'okporo ụzọ ahụ pụọ ma ị maara ebe igwe kwụ otu ebe ga-aga. Yabụ ebe a kwa Cannondale Synapse Carbon Ultegra di2 nwere igwe breeki diski bụ ezigbo ụzọ ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe, ma ịchọrọ ịpịa tarmac na agbụrụ ebe ịchọrọ iti okwute ahụ, chọpụta ụbọchị niile, nwee anụrị, nwee nkasi obi ọtụtụ ike a oké ụzọ igwe kwụ otu ebe niile na niile.
Ya mere hey, ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ihe ndị ọzọ na ọduọ anyịnya igwe, ị nwere ike pịa ebe a iji hụ anyị ọduọ anyịnya igwe playlist. Nwere ike ịlele otu isiokwu na igwe kwụ otu ebe niile dị iche iche nke na-eme ihe ike ma dị fechaa, nke ahụ bụ ibu TCR Advanced Pro One. Pịa ebe a iji lee edemede ahụ ma n'ezie enwere m olileanya na ị ga-enwe ọ thisụ n'isiokwu a ịdenye aha na ịnata mmelite akpaka oge ọ bụla ị bulitere isiokwu ọhụrụ.
Pịa ebe a iji denye aha ma ọ bụ n'okpuru. Ya mere hey daalụ nke ukwuu, pụọ ebe ahụ ma ụgbọala tupu snow agbaze ma ọ bụ mgbe ihe ọ bụla ịchọrọ. Ma daalụ, lezie anya ma nwee obi ụtọ ..
Cannondale Synapse ọ bụ igwe kwụ otu ebe?
IheSynapsebụ okporo ụzọigwe kwụ otu ebenke ahụ bụ ìhè, stiif,ngwa ngwana ihe ijuanya na ntụsara ahụ. Rnya gị ga-aka ogologo. Ga-amachaghị ama.
Cannondale Synapse ọ bụ igwe eji ajịrịja nkume?
2018Ọkpụkpọ CannondaleGbaa ịnyịnya Review. Aga m enweta ya: TheỌkpụkpọ Cannondaleagafe kpọmkwem dị ka m chọrọ okporo ụzọigwe kwụ otu ebena-agba ịnyịnya. OnyeSynapseezubereghi ịbụ agravel igwe kwụ otu ebe, na agaghị m eji ya dị ka ndị dị otú ahụ. Ma pụọ ​​n'okporo ụzọ obodo ma ọ bụ mpaghara ndị na-enweghị akwụkwọ na mgbe ụfọdụ asphalt nwere ike ịgba dị kagravel.Mar 21 2018
Adịghị mkpa a gravel igwe kwụ otu ebe na gravel. Ndị mmadụ na-etekarị igwe kwụ otu ebe na unyi. Ma ọ bụrụ na ị na-agba ọtụtụ gravel, ma ọ bụ na ị chọrọ ịnya karịa gravel, mgbe ahụ, ọ nwere ike ịbụ ezi echiche ịnweta ụgbọ ịnyịnya n'okporo ụzọ gị ka i wee nwee ahụ iru ala ma nwekwuo obi ụtọ ịhapụ Tarmac.
Otú ọ dị, ihe dị oké mkpa bụ na ị nwere ike ịtụgharị ya ka ọ gbaa ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na enweghị mmerụ na-adịgide adịgide. (Rock Rock) Ego mbụ ị ga-atụle bụ na taya sara mbara. Ọchịchị isi mkpịsị aka bụ dabara kasị widest taya na ị nwere ike n'enweghị ihe dabara n'ime gị etiti na ebe e wusiri ike.
N'ezie, ị nwere ike ịnya ụgbọ ala gravel na taya 23 mil n'obosara, mana ọ ga-abụrịrị na ị ga-agbanye ya ka o wee sie ike iwelata ihe egwu nke ịda mba, na n'oge ahụ ị ga-eji nwayọ nwayọ na ọtụtụ erughị ala. Yabụ, na igwe kwụ otu ebe mgbe niile, ị nwere ike ị ga-enwe ike ịgagharị dị ka afanyekwa na taya 28 nke obosara zuru oke nke zuru oke iji jikwaa gravel urance bike with brakes ị nwere ike ịnweta 32, na mgbe ahụ ị bụ n'ezie na egwuregwu. Agbanyeghị, itinye ya na gburugburu ya, na igwe eji ajị anụ na-apụ apụ, ị nwere ike dabara ịnyịnya igwe 40-inch, ikekwe ọbụlagodi taya 45-millimeta na ya.
Na nke a, nke bụ a ezigbo ọduọ igwe kwụ otu ebe, M na-eme nwere a ogologo anụ taya nwechapụ. Ya mere, m ga - ahụ ma ọ bụrụ na m ga - eme ka ọ buru ibu. (Rock music) Na-esote anyị ga-anwa ichedo anyịnya igwe dị ka o kwere mee, n'ihi na gravel pụtara nkume.
Na nkume pụtara ọkọ na anyị mara mma paintwork na ikekwe ọbụna dents na anyị siri eku, etiti teepu ma ọ bụ helikopta teepu. Ugbu a, m zuru ya zuru ugwu ụmụ okorobịa. Nke a bụ teepu mastic na-adịgide adịgide nke si na 3M.
Na nke ahụ zuru oke maka usoro ihe eji eme ihe n'ihi na, ma e wezụga mmetụta na mmetụta sitere na okwute, bump ahụ ga-apụtakwa na ị ga-enwetakwu eriri. Ya mere, nke a na-echebe carbon nwere mmetụta n'ebe ahụ ma na-eme dị ka ego nye ndị enyi, kwụsị ma ọ bụ mechie mkpọtụ ahụ ntakịrị. Mgbe ahụ ị ga - enweta teepu doro anya yana akwa ojii ahụ, m ga - eji nke ahụ na - agbada na tube iji chebe mpempe nkume site na wiilị ihu.
onye natara obi na ezute ezinụlọ na-enye onyinye
Ma n'ezie n'ime oche gị na-anọ ebe a na n'azụ oche oche. M tinye na Terrain mgbe niile na-ekwu na nsọtụ nke m cranks na-n'ezie akwụkwọ ji agwụ site na nkume, na otú i nwere ike n'ezie itinye ego ụfọdụ roba na bumpers na-aga na nsọtụ. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ idobe ha n'ọnọdụ mara mma, nke ahụ nwekwara ike ịbụ ezigbo aha.
Ọzọ anyị na-ekwu maka gia oke. Ebe ọ bụ na ịkwọ ụgbọala na gravel siri ike karịa, ọ na-adị nwayọ nwayọ, n'ihi ya ị nwere ike iji obere akara aka gafere. Ke ofụri ofụri, ndị kasị, mfe, na dị ọnụ ala bụ gbanwee gị n'azụ katrij n'ihi na a ibu.
Ma, ị ga-akpachara anya n’ihi na ndị na-agbara gị azụ ga-egbochi gị ime ka kaseti i jiri mee ihe. Na nke a na Dura Ace azụ triangle ailleur, enwere m ike itinye 11 ruo 30 ebe ahụ. Ọtụtụ mgbe iji ogologo Shimano onu derailleurs ma ọ bụ n'ezie nnukwu onu, ị nwere ike nweta 11 ka 32, ma eleghị anya ọbụna 11 ka 36 n'ebe ahụ.
Mana enwere obere ihe dị nkenke Wolf Tooth na-ere akụrụngwa a na-akpọ njikọ ụzọ. Na nke ahụ na-agbatịkwu ihe nkwụsị gị ka ị nwee ike ịnya casset 11 ruo 40 nke dị oke. Ihe ọzọ ị nwere ike ime bụ ịgbanwe ụdọ gị n'ihu.
Ma enweelarị m kọmpụta kọmpat na ya, yabụ ogologo 5034. Yabụ enweghị m ike ịnweta mgbanaka dị ntakịrị karịa belụsọ ma m gbanwee ihe niile ahụ maka nnukwu kọmpat. Mana ọ bụrụ na m mere ọtụtụ gravel, nke ahụ nwere ike ịbụ ego m chọrọ itinye.
Bikzọ ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ mara mma nke ukwuu, mana otu mpaghara ebe ị nwere ike ịhụ nsogbu dị oke ọnụ dị na wiil gị. Ọ bụghị n’ihi na ha esighi ike, naanị maka na mgbe ị na-akwọ ụgbọala na gravel ị yikarịrị ka ị ga-akụ nnukwu ma ọ bụ nnukwu okwute, hapụ gị taya dara ada na ihe nwere ike ime na rim. Site na wiilị alloy, enwere ike idozi ya ma ọ bụrụ na ọ dịghị njọ.
Ma na igwe kwụ otu ebe, nke ahụ nwere ike ịnwụ. Ọ bụghị n'ihi na igwe kwụ otu ebe adịghị ike, naanị n'ihi akụrụngwa nke eriri carbon. Ka o sina dị, ọ dị mma.
Yabụ ọ bụrụ na inwere ego, ebum n'uche gị bụ itinye ego na wiilị dị oke ọnụ. Ọ bụghị dị ka m kwuru, n'ihi na ha siri ike, mana ọ bụ naanị n'ihi na ịgaghị echegbu onwe gị banyere nkume ọ bụla nke gafere gị ụkwụ mara mma. Dị ka ego a gbakwunyere, ị nwere ike ịhapụ nke abụọ nke wiil ndị ahụ na taya gravel gị na cassette gravel gị, nke pụtara na ụzọ ọzọ gị nwere ike ịhapụ ya na taya okporo ụzọ gị na kaseti ụzọ gị.
Yabụ, ị nwere ike ịgbanwe n'etiti igwe gravel n'okporo ụzọ gị na igwe kwụ n'okporo ụzọ gị site na ịpịgharị wiilị gị, enweghị afọ ojuju, enweghị nsogbu. (Jazz music) Ngbanwe ikpeazụ anyị bụ iji akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe na ugwu ụkwụ anyịnya igwe. Maka ebumnuche dị mfe na ị nwere ike ibupụ akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe na n'ihi na ha apụọ na gravel, ugbu a ịkwesighi ịpụ ma jee ije, mana ị nwere ike ọbụlagodi na ọ bụ naanị maka selfie.
Ma oburu n’itinye aka na gravel na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ carbon gị, ị nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa na ha na-akụ ọkọ. Ya mere, akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe bụ ego. Ọ ga - akara m mma itinye oge na ịnyịnya ụkwụ na ịnyịnya ígwè n'okporo ụzọ karịa ụkwụ ụkwụ igwe kwụ otu ebe, mana ọ bụrụ na ị na-eji akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe, ị gaghị enwe ike ịgafe okporo ụzọ, yabụ na ị ga-achọ pedal igwe kwụ otu ebe.
Ma enwere ego, ha nwere ihu abụọ, nke na-eme ka ọ dị mfe ịbido. Ọfọn, enwere igwe ịgba ọsọ m gbanwetụrụ. Taya sara mbara, wiil dị iche iche, agbanwere m pedal ma gbanwee akpụkpọ ụkwụ m.
Enwere m ihe ndị ọzọ n'ebe ahụ ma ejiri m teepu chebe ya dị ka o kwere mee. Naanị mgbanwe a hapụrụ m. Dị ka Kelly Fritz kwuru n'otu oge dịka onye nta akụkọ bara uru, akpa akwa bụ ọnọdụ uche.
Echere m na ndị a bụ nnukwu ego, ọ bụghị naanị maka gravel, m na-ewu ewu. Nanị ihe m chọrọ bụ afụ ọnụ. Mana enwere m ike ichere ndụ m maka otu n'ime ndị a na GCN.
Enwere isiokwu ọzọ maka gị, Rock on, Gravel! (Jazzy music)
lance armstrong akwụkwọ
Cannondale ndị ezigbo ụzọ anyịnya igwe?
Y’oburu n’icho alumini ka karbon ma obu n’achoghi imefu puku kwuru puku dolla n’agba oso di eluigwe kwụ otu ebe, nweta otu n'ime ụdị CAAD, ma ekwekwala ka ọnụ ahịa ha ghọgbuo gị - a na-ewere ha dị ka ndị kachasị mmaNongbọ okporo ụzọ Cannondalegburugburu.Ọnwa Ise 11, 2021
Cannondale dị mma karịa Trek?
Y’oburu n’inwe ogologo ahu,Nke Cannondaleakpa akpa na-agba ọsọ ntakịrị oge ma nwee ike dabara ntakịrịmma, Jowett na-adụ ọdụ. N'aka nke ọzọ, mkpụmkpụ mkpụmkpụ nwere ike dakọtarammaka aMee njem. Emecha na ogo zuru oke zuru oke. ''Mee njemn'ezie awade ammauru na njedebe dị ala.
Nwere ike ịgba ọsọ Cannondale Synapse?
IheỌkpụkpọ Cannondalebuotunke ndị ntachi obi ụzọ anyịnya igwe nagị'A ga-egbochi ya maka imehie ihe kwesịrị ekwesịagbụrụigwe kwụ otu ebe Ebumnuche ya bụ ka ọ gwakọtaagbụrụ-ama arụmọrụ & jiometrị na nkasi obi anyị niile chọrọ maka ndị ahụ ogologo ntachi obi na-agba ịnyịnya. Nọvemba
Kedu nke kachasị mma Trek ma ọ bụ Cannondale?
Cannondale Synapse 105 na igwe anwuru oji?
IheỌkpụkpọ CannondaleCarbon Disc GhaOgbe 105Ndị 2019Ajịrịja nkume Bikena-ewere ọkọlọtọỌkpụkpọ Cannondalema debe yagravelna-agba ịnyịnya. ỌkọlọtọSynapseEzubere maka nnukwu ịnyịnya n'okporo ụzọ niile. Ọ bụ Ezi Ntachi Obi Machinery; aigwe kwụ otu ebenke nwere ike ịnya na gas zuru oke ụbọchị niile.
Cannondale dị mma karịa nnukwu ibu?
Uzochukwunwere a wider nchịkọta ugwu anyịnya igwe na niile etoju tụnyereibu, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta elu-edu carbon zuru ezu nkwusioru n'okpuru 5000 $ibubụ ika ịhọrọ, n'otu oge ahụ ụdị abụọ ahụ na-eji akụkụ dị mma na ngwa ọrụ draịntị kachasị ọhụrụ maka ihe ha na-ewu.
ụzọ kacha mma isi sie anụ
Gịnị mere igwe ọgbụgba Cannondale ji dị oke ọnụ?
Emere ha iji bulie arụmọrụ, mana ọ na-abịa na ọnụahịa.Yabụna nchịkọta ya, ha bụoke ọnụn’ihi ihe, oge, na ọrụ. Ndị dị iche iche nwere nkọwa dị iche iche nkedị oke ọnụ, mana ee $ 2000 + bụdị oke ọnụ.Yabụdị nnọọ jide n'aka na ị ga-esi a ọma igwe kwụ otu ebe, ya kwesịrị ya.
Kedu ihe ka mma njem ma ọ bụ nnukwu?
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe bụ Cannondale synapse diski Sora?
Synapse, ọ bụrụ na ịnabatabeghị ya na mbụ, bụ azịza Cannondale na ahịa ntachi obi, yana obere njigide na-eme ihe ike na ọnọdụ ịnyịnya n'elu igwe agbụrụ ya. Ọ gbanwere ihe karịrị afọ n'ime ihe ị na-ahụ ebe a.
Enwere ụdị ndị ọzọ dịka synapse nke Cannondale?
N'ihe banyere ịdị mma, ụdị ole na ole jikwaa ịnapụta ihe Cannondale nwere ike. Karịsịa ma a bịa n'ụdị ụzọ - ọ nweghị onye na-asọ mpi. Ugbu a ka nke ahụ bụ ebe igwe kwụ otu ebe Synapse si - ihe nlebara anya pụrụ iche na ịme ihe kachasị mma n'ebe ahụ. Maka ịzọ ụzọ, ikekwe ị gaghị ahụ igwe kwụ otu ebe ka mma.
Kedu nke kacha mma Cannondale ịnyịnya ígwè ịzụta?
Cannondale Synapse Hi-Mod Disc Dura-Ace Di2 Level 5 ọkachamara jiri ya tụnyere mbipute gara aga, Cannondale Synapse ọhụrụ ahụ dị nwayọ, nwee ntụsara ahụ, dị mfe ma sie ike - na otu n'ime igwe kwụ otu ebe kachasị mma n'ahịa ugbu a.